Synergy, chishandiso chinobatsira kwazvo | Kubva kuLinux
Synergy, chishandiso chinobatsira kwazvo
rawBasic | | GNU / Linux, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Shamwari dzakanaka! ..
Mune yangu yekutanga kutumira ini ndinouya kuzounza iwe nekukurumidza gwara kune chishandiso chandakashandisa kwenguva yakareba, ichi chinonzi Synergy. Chirongwa ichi chinotibvumidza kugovana yedu keyboard uye mbeva pakati pemakomputa akati wandei, tichifamba kubva kune imwe yekutarisa kuenda kune imwe, nekungodhonza mbeva kumucheto kwetoni.
0.1 Zvinonakidza zvinhu:
1 1. Kuisa:
2.1 2.2. Kugadziridza Faira:
2.2 2.2.1. Kugadziridza muenzaniso:
2.3 2.2.2. Nei uchishandisa zvinyorwa-zvakagadziriswa?
2.4 2.3. Kutanga Server / Mutengi
2.5 2.3.1. Kutanga Server
2.6 2.3.2. Tanga Mutengi
3 3. Matambudziko akajairika (andakasangana nawo ini pachangu):
3.1 3.1. Same Hostname:
3.2 3.2. Kanganiso «risingazivikanwe zita rechiso« XXX »«
3.3 3.3. Error «Haikwanise kuvhura primary screen«
3.4 3.4. Mamwe matambudziko
Iyo yakawanda multiplatform! Hongu vanababa, munogona kuyambuka neyenyu distro linuxera yekuravira, pamwe newindo uye / kana apuro.
Sezvo isu tiri kushandisa akati wandei makomputa, tinogona kushandisa akati wandei zvirongwa zvakagoverwa pakati pedu michina pasina kugutsa imwechete processor; Mune mamwe mazwi, zvinoreva kuti hatidi "super komputa" asi tinogona kutora mukana kune akati wandei nezvishoma zviwanikwa.
Nyore, ingori keyboard uye mbeva pamusoro petafura.
Goverana clipboard (kopi uye unama mavara) pakati pemakomputa.
Sezvandakakuudza pamusoro, kunyangwe uri multiplatform, isu ticha tarisa pamaitiro ekuishandisa mune yedu Penguin. Muchirongwa ichi ini ndichaenda kutarisisa Debian uye zvigadzirwa zvaro (Ubuntu, Linux Mint, nezvimwewo) zvekuita, asi ndinokahadzika kuti zvichanetsa kuchinjisa kune chimwe distros. Totanga here?
Tinogona kurodha yazvino vhezheni kubva ku pano, kana imwe vhezheni yapfuura, ingave beta kana yakagadzikana kubva ichi batanidzo.
Kana, mune iyo kesi ye Debian uye yakatorwa, kubva kune yavo inochengeterwa:
# apt-get install synergy
Kuiswa kwepakeji kunofanirwa kuitwa pane ese michina inoda kuve nechekushandisa mukushandisa kwayo.
Nhanho yekutanga mukumisikidza kudyidzana ndeyekuvhura chiteshi pachizogadzirwa zvinongedzo, zve Default ichi chiteshi chengarava 24800. (mune nyaya yekuti unenge watoshandisa kana kungoda kushandisa imwe, zvinogona kuitwa chinyararire, chete kana uchichiita chinofanira kudoma chiteshi chekushandisa); izvi zvinoitwa nemurairo iptables:
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 24800 -j ACCEPT
Chii ichi chinoita?
-A = inowedzera mutemo kuketani.
-p = inotsanangura protocol.
--dport = inoratidza chiteshi chekuenda.
-j = inosarudza chiitiko.
2.2. Kugadziridza Faira:
Iye zvino nechiteshi chakavhurika, isu tinoenderera nekugadzirisa kudyidzana:
Neyaunofarira mavara edhita (mune yangu vi) tinogadzira iyo faira synergy.conf en / nezvimwe /
# vi /etc/synergy.conf
Mukati maro tichaenda kunyorera chimiro chinotevera:
right = hostnameDelCliente2
left = hostnameDelCliente1
right = hostnameDelServidor
left = hostnameDelServidor
Ongorora: chimiro chakaratidzwa pamusoro apa muenzaniso wekumisikidzwa nemichina mitatu. Imomo iyo iri pakati iri sevha (iyo ine mbeva uye keyboard) uye imwe iyo 3 sevatengi pamativi ayo. Shandura ino gadziriso zvichienderana neodha uye huwandu hwemachini aunoda.
2.2.1. Kugadziridza muenzaniso:
// Order: Kuruboshwe--> Kurudyi
// Hostname: PC1 (server) ---> PC2 (mutengi)
// IP: 10.9.0.1 ---> 10.9.0.2
kurudyi = PC2
kuruboshwe = PC1
2.2.2. Nei uchishandisa zvinyorwa-zvakagadziriswa?
Zvakanaka, chikonzero chekutanga ndechekuti iwe hauna chaicho sarudzo, kunze kwekunge uri kushandisa imwe vhezheni ine graphical interface. Chechipiri, inokupa iwe kutonga kwakawanda. Chinongedzo hachikwanise kugadzira marongero epamberi, senge isiri-yekudzokorora kubatana. Muenzaniso weiyo isiri-yekudzokesa kubatana ndeye kana iwe ukaenda kurudyi kwekutarisa A iwe unosvika kuti utarise B, asi kana iwe ukaenda ipapo kuruboshwe rwecherechedzo B unowana wekutarisa C panzvimbo pezve kuongorora A sezvingave zviri mukubatanidza kumisikidza kudzorera.
Aya marongero ari nyore kugovana nevamwe vanhu.
Iwe unogona kuve neanopfuura kamwe akashongedzerwa nezvombo, yezviitiko zvakasiyana. (sezvazvinogona kuva ne bookbook kuti unoishandisa munzvimbo dzakasiyana siyana)
2.3. Kutanga Server / Mutengi
2.3.1. Kutanga Server
Kana magadzirirwo akakodzera akaitwa, zviri nyore sekuisa zvinotevera mukoni.
Tarisa uone ma 's' kumagumo, izvi zvinoreva Server.
Kana isu tichida kuona kuti yakatakura kumisikidzwa zvinobudirira uye chimwe chinhu chinopfuura Info, kana uchitanga, isa zvinotevera:
$ synergys -d DEBUG
2.3.2. Tanga Mutengi
Kamwe kana sevha yatanga pamushini kubva kwatichazoshandisa zvigadzirwa zvedu (keyboard uye mbeva), tinotanga mimwe michina inosanganisirwa sevatengi; kuisa mune inouraya:
$ synergyc -f IPdelServidor
Cherekedza iyo 'c' mukati munhu anoda kubetserwa, uye inoti kupi ServerIP isa inoenderana IP, kana tikatarisa pamuenzaniso kesi (ona 2.2.1) ichave iri:
$ synergyc -f 10.9.0.1
-Kana tichida kuona maitiro uye kubatana neseva:
$ synergyc -f IPdelServidor -d DEBUG
-Dai taive tataura chiteshi chakasiyana neicho chaishandiswa Default (24800), tinoisa:
$ synergyc -f IPdelServidor:puerto
3. Matambudziko akajairika (andakasangana nawo ini pachangu):
3.1. Same Hostname:
Kana paine chero emacomputer aunoda kubatana nawo kuburikidza Synergy Iro rine zita rakafanana neerimwe, chirongwa ichi hachizive kana uchichishandisa icho charinoreva. Kugadzirisa dambudziko, tinofanira kuritumidza zita (hostname) kune mumwe wavo. Isu tinozviita nenzira inotevera:
, ipapo isu tinogadzirisa iyo faira:
/ etc / hostname
uye iyo faira:
/ etc / maoko
, uine chokwadi chekuti 127.0.0.1 inotaura nezve iyo imwechete komputa:
3.2. Kukanganisa "Risingazivikanwe zita rechiso «XXX» «
Kana iyo yekumisikidza ikatakurwa zvinobudirira uye iwe ukawana iko kukanganisa, saka zvinoreva kuti iyo server yekutarisa haisi mukugadzirisa. Ma monitors ese anofanirwa kuverengerwa musarudzo.
3.3. Kukanganisa "Haugone kuvhura yekutanga skrini«
Kugadzirisa izvi, mhinduro yakapusa ndeye kutanga kutanga mutengi, uyezve sevha.
3.4. Mamwe matambudziko
Kune zvimwe zvikanganiso zvinomuka, anotevera matambudziko anobatanidza pane peji re Synergy.
Ndinovimba waifarira yangu ipfupi tutori. Izvo zvinofanirwa kutaura kuti kunyangwe ini ndichiratidza yekutanga dhizaini, ine akawanda mamwe mashandiro ekuwedzera, sekukamura muchikamu chipi chekutarisa shanduko inoitwa kune mumwe muchina, pakati pevamwe. Kana iwe uchida kuwedzera, iwe unogona Google kune mamwe marongero epamberi.
Ndizvozvo, uye ndinotarisira kuti mupiro uchave imwezve tsanga dzejecha kune wese munhu.
Kubva ndatotenda chaizvo ..
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Synergy, chishandiso chinobatsira kwazvo
Anoshamisa, zvikuru, anobatsira.
OT: Ndinoona wagamuchira post yangu! .. wii ..
Ndiri kufara kuti zvinobatsira kwauri .. 😀
Kugona chose. Ichi chokwadi ndechekuti zvinoita kunge zvinobatsira. Ndakanga ndanzwa nezvekubatana, asi ndakanga ndisati ndambozviedza. Ndotenda zvikuru. 🙂
Michael Martinez akadaro
Ruzivo rwakanaka, rwakarongedzwa zvakanaka ngatiedzei
Pindura Miguel Martinez
Blaire pascal akadaro
Well Scalibur… Welcome to the family. Wangu usr mumiriri akashata kungoitika. Inonyanya kubatsira.
Pindura Blaire Pascal
Thanks! .. ..my usr mumiriri akakanganisawo .. Ini ndinoshandisa Linux Mint kwechinguva neOpenBox .. munguva pfupi ArchLinux mushandisi ..
Uye zano remusoro wenyaya waive wekuunza chimwe chinhu chinobatsira uye chisina dzidziso, kana zvirinani zvandaona .. xP
Pasina mazwi, chii chimwe chandingataure. Musoro wakanakisa pamwe nesarudzo yakanaka kwazvo kana sarudzo kune avo vane (ini ndinozvibatanidza) kudiwa kwekushandisa maPC mazhinji uye kuatonga kubva kune imwe chete pasina zvakawanda pakombuta.
Pindura kuna jorgemanjarrezlerma
Izvi zvinonyanya kushanda pane kushandisa KVM, sezvo ichikubvumidza kuteedzera nekunamatira pakati pemakomputa akasiyana siyana ... ZVAKANYANYA KUSHANDISA iyo posvo, uye ndiyo yekutanga.
Pindura kuna Charlie-Brown
Ndatenda kwazvo nekutambirwa! .. .. uye ndinofara kuti zvinobatsira kwauri ..
Ndinovimba ichi ndicho chekutanga pane vashoma;) ..
Gamuchira nhengo 😉
Ini ndanga ndatoisa chishandiso ichi muchirongwa zvisati zvaitika, iko kusarudzika kana kukamurwa kwandakaona ndekwekuti ini ndaifanira kudzora makomputa gumi panguva imwe chete HAHA, yakawandisa LOL!
Kwazisai uye hongu, ngatitarisirei kuti ndiyo 1st yezvizhinji 😀
Mhoro! yakanaka kwazvo posvo, ndiri kuzoyedza ne desktop yangu pc uye pamakumbo angu, kuti iyo keyboard ikamonerwa… .. Ini ndinongova nekusahadzika kumwe chete, ndinoziva kuti chirongwa ichi chinofanirwa kuiswa muzvinhu zviviri izvi, asi kumisikidzwa hakuite Ini ndakanyatsojeka, zvinongoitwa chete muPC Server kana mune zvese ndinofanira kuisa iyo yekumisikidza faira?
Pindura kuna AlonsoSanti14
Mhoroi! .. ..inongodiwa chete iyo config muPC Server .. .. Ndinovimba inoshanda kwauri ..
ok ndatenda ... uyezve zvichabatsira kwazvo ...
Ini handisati ndamboshandisa asi kana iine yakanaka mhinduro yekumhanyisa inogona kuve inonakidza imwe nzira kune ssh / mosh kana iwe uine muchina uri padyo nayo.
Mhoroi! .. ..inokurumidza chaizvo maererano nemhinduro .. .. hapana musiyano pakati pemuchina mumwe neumwe .. ..zvinokwanisika kugadzirisa mubatanidzwa nessh .. ..Kwaziso! ..
Ndapedza, ndakatarisa mafaera ekumisikidza akatumirwa nedistro yangu, ndakatarisa gwara rako uye ndatova nezvikwata zvakabatana neSynergy paAhihi pachinzvimbo cheIPs (zvinova ndizvo zvandinoshandisa kumba).
Nyatso kujekesa yako Scalibur tsananguro. Nesimba reGreykull !!
Ah aiwa, anga ari mumwe munondo 😛
Hahaha .. ..Ndafara kwazvo kuti zvaibatsira iwe ..
PS: zvinonakidza Avahi, ini ndakanga ndisati ndambonzwa nezvake ..
Avahi / mDNS ndiyo yakanakisa kugadzirwa pasirese mushure mekokoreti Latte 🙂
Chaizvoizvo Avahi ndiko kuvhurwa kwesimba kweBonjour, kuitwa kweApple kweZeroconf protocol inosanganisira mDNS sembiru yekumisikidza sezvo iri chaiyo mDNS tekinoroji iyo inobvumidza multicast muLAN network kuitira kuti vagone kuzvitsvaga uye vozvimisikidza vese zvakabatana michina inomhanya sevhisi iyi.
Uye pano ini ndoda kugadzira kapfupi mabakureti:
Apple inogara iri pakati pekutsoropodzwa zvine utsinye kubva kune ese maindasitiri uye chokwadi ndechekuti zhinji dzenguva idzodzo hazvina kunaka zvachose sezvo zvese mDNS protocol (multicast yemidziyo inoshandisa Zeroconf), seCUPS neWebKit, kutumidza matatu Hyper-inozivikanwa zviitiko zvakagadzirwa neApple munzira yakavhurika uye nhasi isu tese tinobatsirwa nazvo. Micro $ kazhinji, kune rumwe rutivi, haingori chete ine maitiro anovenga ebhizinesi (senge Apple, ichokwadi) asi ivo zvakare vari vepakati vanotarisa guvhu ravo uye vanogara vachirarama vachiita zviitiko muchivande uye vasina kushambadza iwo maratidziro, yakadai yaive nyaya yeCIFS , Microchot budiriro inoenderana neSMB (Server Meseji Inodzivirira) uye yakazodzoreredzwa muF / LOSS munda seSAMBA.
Mune ino kesi chaiyo, Micro $ kazhinji zvakare ine yayo Zeroconf kuitisa asi chokwadika ndeyekushandisa kuitisa, yakavharwa zvachose uye yakawandisa pakati peye Apple, nekuti kana tikatarisa kuti ndeapi maMicrosoft network, tichaona kuwanda. yemapaketi anouya nekuenda kwese kwese, achiroverana pamwe nekuzadza network.
Zvakare: kana iwe uine mukana wekucherechedza netiweki dzeMicrosoft, iwe uchaona maratidziro emitoro ma LED pamakadhi enetiweki (anowanzo girini) achibhenekera achienderera asingamire, kunge kupenga, kana kumisikidzwa kumwe chete neApple kana F / LOSS mhinduro iri yakawanda inoshanda zvakanyanya.
Zvakanakira kushandisa Avahi / Zeroconf / Bonjour akawanda, kusanganisira:
1. Haufanirezve kuyeuka IP yemuchina wega wega kubva uchishandisa Avahi iwe unovasvikira kuburikidza nezita ravo + .local, semuenzaniso:
olivetti.local (my multipurpose home server)
arrakis.local (iyo NAS)
heybeab.local (my lap)
Ndichishandisa Avahi / mDNS ini ndinowana yega yega ine yayo hostname panzvimbo yeIP. Nenzira iyi, munzvimbo dzine _many_ michina, iwe unobvisa iro dambudziko reIPs remakomputa anochinja sezvo iwe uchizogara uchiasvikira ne yavo hostname.
Pamusoro peizvi, makomputa network anonyanya kutarisirwa kune vanhu vasingazive nezveiyo OSI pfungwa uye vachiri kuwana IP kero ingangoita arcane.
Mune yangu chaiyo kesi, ivo vanotoziva kumba kuti kana ndisipo uye network inononoka, imhaka yekuti ndiri kutenderera segehena (zvese zviri pamutemo zviri mukati, hongu: D) saka zvese zvavanofanirwa kuita kuwana sevha kuburikidza zita rako uye kumbomira kurodha pasi - uchishandisa Transmission's inotonhorera webhu interface. Asi hei, ivo havatozive kuti Chii chinonzi Transmission ingave xD
2.Plagi & Tamba: mune sangano kana hombe network kana uchishandisa Avahi unozvigadzira wega chishandiso chaunoda kugovana chinowanikwa, semuenzaniso maprinta, scanner, maseva, NAS, nezvimwe.
3. Avahi / mDNS zvakare inobvumidza iwe kusarudza yakatarwa IPs kune yakatarwa hostname. Semuenzaniso: unogona kuzivisa kuti michina yese iri mune imwe netiweki nhanho inowanikwa kuburikidza nemuzita rezitaX.local iyo inorerutsa kudyidzana nemichina iyi (sevhisi, kuisirwa software nyowani, nezvimwewo).
4. Izvo chaizvo ZVINONYANYA KUSHANDISA kushandisa Avahi / mDNS mukumisikidzwa kwenetiweki kune vatengi kubvira nenzira iyi - kune zvataurwa pamusoro- tinozvisunungura kubva nekusingaperi tichirangarira zvivakwa uye kugadzirisa. Kuziva zita rechikwata chega chega (semuenzaniso, kubaya nhepfenyuro) tinofamba seyeri kuburikidza netiweki uye tinopedzisa basa redu kare zvisine zvipingamupinyi 🙂
Zvisinei, Avahi / mDNS (Avahi / Zeroconf) inopa mikana yakawanda yandinoshandisa chidimbu chete asi zvirokwazvo mumwe munhu anofanirwa kubata netiweki nezvikwata zvakawanda zvine zvido zveheterodox nenzvimbo dzinogona kuchinjika anozozviona zvichibatsira ... _ ^
haha yakanaka posvo, chinhu chakanaka ndechekuti kana iwe ukashanda pamatafura akati wandei panguva imwechete uine mbeva kune wese munhu zvinoita kuti zvese zvive nyore, ndinofunga zvakanaka.
Nenzira iyo zvingave zvisinganzwisisike kana ivo vasingagamuchire iyo positi yakanaka kwazvo.
Pindura kuna rodolfo
Chinyorwa chakanakisa…. Ndatenda uye ramba uchiisa zvinonakidza zvinhu.
Ndatenda nekundiratidza chirongwa ichi.
Ini ndinotenda kudiwa ndisati ndaona iyo Post.
Pindura Ado Ello
Kuedzwa uye kubvumidzwa.
Yakashanda zvakakwana kwandiri. Iye zvino ndiri godo revazhinji vatambi.
Pindura kuna @Jlcmux
Hei! .. .. ndangoona mhinduro yako .. .. ruregerero (chii chinoitika kana ukasatarisa email yako) ..
Ndiri kufara kuti zvakashanda kwauri! .. 😀
Ini ndinoramba ndichiishandisa mazuva ese ... zvese zororo uye basa .. trabajo
Nei Ubuntu ichida Android-dhizaini "Butter Project"?
Boxer - Iyo Trojan iyo inokanganisa zvishandiso zveApple